Ogaden News Agency (ONA) – Gurigii Madaxwayne-Kuxigeenka Kenya oo Dab Laqabadsiiyay.
Gurigii Madaxwayne-Kuxigeenka Kenya oo Dab Laqabadsiiyay.
Wararka naga soo gaadhaya dalka Kenya ayaa tibaaxaya in rag hubeysan oo aan haybtooda lagaranaynin ay weerar ku qaadeen guriga Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya Willaim Ruto uu ku leeyahay degmada galbeedka dalkaa ku taal ee Uasin Gishu.
Ragga hubeysan ayaa toogtay mid ka mid ah raggii ilaalinayay guriga Madaxweyne ku xigeenka ka dibna gudaha u galay. Qaar ka mid ah warbaahinta dalka Kenya ayaa soo warinaya in weerarkan uu dhacay 30 daqiiqo ka dib markii Madaxweyne ku xigeenku iyo qaar ka mid ah xubnaha qoyskiisa ay ka baxeen gurigaa.
TV-ga NTV ee dalka Kenya ayaa sii daayay Muuqalada ciidamo boolis ah oo aad u hubeysan oo halkaa isku geedaamay. Saraakiisha Booliska iyo Saraakiisha Xafiiska Madaxweyne ku xigeenka ayaan weli arrintan ka jawaabin.
Dhacdadan ayaa ku soo beegmeysa 10 maalmood ka hor doorashooyinka dalka Kenya. Ujeedada weerarka ma cadda, laakiin guryaha uu Kenya ka deganyahay madaxweyne ku xigeenka ayaa waxaa si weyn u ilaaliya ciidamo boolis ah oo sida miltariga u tababaran.